ဒူဒူကြီး: Flow metering - Instrumentation - Capacitance based DP cell
Flow metering - Instrumentation - Capacitance based DP cell
Flow metering အတွက်အသုံးပြုတဲ့၊ instruments တွေကို၊ 'primary' device နဲ့ 'secondary' device ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ orifice plate, spring loaded cone အစရှိတဲ့၊ fluid flow အတွင်းထည့်သွင်း ထားတဲ့၊ instruments တွေကို primary device တွေအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ differential pressure cell လို၊ signals ကို translate လုပ်ကာ၊ usable form အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမယ့်၊ instruments တွေကိုတော့ secondary devices တွေအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Typical orifice plate steam flow metering station
ဒါ့အပြင် ရရှိလာတဲ့၊ information အချက်အလက်တွေကို၊ process နဲ့ display လုပ်ကာဖော်ပြတဲ့၊ electronic processors တွေနဲ့ pressure နဲ့ temperature တို့လို၊ additional signals တွေကို၊ density compensation calculations အတွက် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမယ့်၊ electronic processors တွေကိုလည်း secondary devices တွေအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
pipeline unit ဟာ၊ orifice plate flow meter သို့မဟုတ် pilot tube တို့ကိုသုံးထားတဲ့အခါ၊ primary device ဖြစ်တဲ့၊ differential pressure measuring device အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ primary device မှ၊ pressure signal ကို၊ secondary device ဖြစ်တဲ့၊ Differential Pressure (DP or ΔP) cell မှ၊ electrical signal အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမှသာ၊ electronic processor တွေအနေနဲ့၊ process, display နဲ့ density compensation calculations တွေကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ DP cell တွေကိုခွဲခြား ကြည့်ရင် Capacitance based DP cell, Strain-Gauge Based DP cell, Potentiometric based DP cell နဲ့ Pneumatic DP cell ဆိုပြီးတွေ့ရ ပါတယ်။
တကယ်တော့ Strain-Gauge Based DP cell နဲ့ Potentiometric based DP cell တို့ဟာ၊ traducer တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ differential pressure မှတဆင့်၊ electrical signal အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ အတွက်၊ pressure transmitter အနေနဲ့အသုံးပြုကြပြီး၊ DP cell အဖြစ် သတ်မှတ်ခေါါဆိုကြပါတယ်။
Capacitance based DP cell
Capacitance based DP cell ဟာ၊ electrical capacitance device တခုဖြစ်ပြီး၊ differential pressure နဲ့အတူ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ dielectric oil အတွင်းနှစ်ထားတဲ့၊ metal သို့မဟုတ် metal-coated quartz diaphragm တွေ ပါဝင်ပြီး diaphragm metal အဖြစ်၊ stainless steel material ကိုအများဆုံးအသုံးပြု ပါတယ်။ corrosive ဖြစ်နိုင်တဲ့ applications တွေမှာတော့၊ high-nickel steel alloys တွေဖြစ်တဲ့၊ Inconel ဒါမှမဟုတ်၊ Hastelloy တို့ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ chlorine, fluorine နဲ့ halogens ကဲ့သို့၊ gas applications တွေအတွက်၊ silver diaphragms တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။
Fig. Simple DP cell
cell အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ upstream နဲ့ downstream pressure (၂) ခုတို့ဟာ၊ မတူညီတဲ့အတွက်၊ pressure difference ဆိုတဲ့ differential pressure ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ diaphragm movement ကို ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။
DP cell ကို၊ power supply ပေးသွင်းတဲ့အခါ၊ diaphragm movement ကြောင့် plates တွေမှာဖြစ်ပေါါတဲ့၊ capacitance တန်ဘိုး အပြောင်း အလဲဖြစ်ပေါါပြီး၊ electrical output signal ကိုထုတ်ယူပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ output ဟာ4~ 20mA current signal ဖြစ်ပြီး၊ 1 ~ 5V voltage signal အဖြစ်ပြောင်းလဲယူရပါတယ်။ capacitance based DP cell တွေကို၊ single plate capacitor နဲ့ two-plate capacitor DP cell ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
single plate capacitor DP cell မှာ၊ stationary plate ကို diaphragm ရဲ့ အနောက်မှာတတ်ဆင် ထားပါတယ်။ diaphragm ရဲ့ movement လို့ခေါါတဲ့ diaphragm deflection ကြောင့် diaphragm နဲ့ stationary plate ကြားမှာ၊ variable capacitance တန်ဘိုးတခုကိုရရှိလာပါတယ်။ variable capacitance ဆိုတဲ့၊ capacitance တန်ဘိုး အပြောင်းအလဲကို၊ stationary plate မှရယူပြီး၊ DC current သို့မဟုတ် voltage signal အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ၊ panel meters သို့မဟုတ် microprocessor-based input/ output boards တွေကိုပေးပို့ပြီး၊ ဖတ်ယူပါတယ်။
Fig. Two-plate capacitance DP cell
two-plate capacitor DP cell မှာတော့၊ stationary plate (၂) ခုကြားမှာ၊ diaphragm ကိုတတ်ဆင် ထားပြီး၊ high-frequency နဲ့ high-voltage oscillator တို့မှတဆင့်၊ stationary plates တွေကို၊ charge လုပ်ပါတယ်။ diaphragm deflection ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့၊ capacitance တန်ဘိုး အပြောင်းအလဲကို၊ bridge circuit မှလက်ခံရယူပါတယ်။
Fig. DP cell unbalanced mode
bridge circuit မှာ balanced နဲ့ unbalanced mode တို့ပါဝင်ပါတယ်။ balanced mode ဟာ၊ differential pressure ကိုတိုက်ရိုက်တိုင်းယူပြီး၊ output ကို၊ null detector လို့ခေါါတဲ့ comparator သို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့ သလို၊၊ bridge circuit ကို၊ null ဆိုတဲ့ no value အနေအထားမှာရှိနေစေပါတယ်။ unbalanced mode မှာတော့၊ differential pressure ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ output voltage တန်ဘိုးကို၊ excitation voltage နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီးမှ၊ pressure measurement ratio အနေနဲ့၊ ပေးပို့ပါတယ်။
Fig. Single plate capacitance DP cell with micro capacitance silicon sensor
static pressure, over pressure နဲ့ temperature effects တို့ကြောင့်၊ DP cell ရဲ့ characteristics ကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်၊ stability နဲ့ reliability ကောင်းမွန်စေဖို့၊ micro capacitance silicon sensor တွေ ကို၊ measuring cell ရဲ့ neck မှာထည့်သွင်းတတ်ဆင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ DP cell တွေကို၊ advanced DP cells တွေ အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ differential pressure တိုင်းတာခြင်းအတွက်သာမက၊ actual temperature နဲ့ pressure ကိုပါ၊ ဖော်ပြနိုင်ခြင်း၊ self-monitoring သို့မဟုတ် diagnostic facilities တွေပါဝင်ခြင်း၊ communication capability တွေ ပါဝင်တဲ့ အတွက်၊ HART® နဲ့ Fieldbus တို့လို၊ signal digital control system တွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြု နိုင်ခြင်းတို့ကို၊ တွေ့ရပါတယ်။ အချို့ advanced DP cells တွေဟာ၊ time, steam tables, energy usage ဖြစ်တဲ့ power (kW or Btu/h) နဲ့ heat (kJ or Btu) အစရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပါ၊ ဖော်ပြနိုင် ပါတယ်။
DP cell သို့မဟုတ် measuring cell တွေမှာ၊ differential pressure မှတဆင့်ရလာတဲ့၊4~ 20 mA DC analogue signal ကို၊ amplified လုပ်ပြီး၊ flow rate indication အတွက်အသုံးပြုရုံသာမက၊ data အနေနဲ့၊ control unit တွေမှာပါ အသုံးပြုတဲ့အတွက်၊4~ 20 mA DC analogue signal ကို၊ control signal အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Advanced DP cell
advanced DP cells တွေဟာ၊ control signal တွေကို၊ translate လုပ်ကာ၊ usable form အဖြစ်ပြောင်း လဲပြီး၊ data တွေအနေနဲ့ secondary devices တွေထံသို့ ထပ်မံပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ Data တွေကို၊ manual, semi-automatic နဲ့ fully automatic ဆိုပြီးလိုအပ်သလို၊ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Dedicated computers, Stand alone PLC လို့ခေါါတဲ့ Programmable Logic Controller system, Centralized DCS လို့ခေါါတဲ့ Distributed Control Systems နဲ့ SCADA လို့ခေါါတဲ့ Supervisory Control And Data Acquisition systems တွေဟာ၊ Data collection ကိုဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ Data collection ဟာ၊ management tool တခုဖြစ်ပြီး၊ monitoring လုပ်ခြင်းသာမက၊ energy costs control ကိုပါဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Image credit to : http://www.spiraxsarco.com/, http://www.fujielectric.fr/, http://www.omega.com/, http://www.cheric.org/, http://www.ftcco.ir/
Posted by ကိုထွန်း at 21:49